Mavhesi eBhaibheri Pane Zvepamusoro: Nhamba 5 -> Yemasvomhu Signs
Yemasvomhu Signs: [Nhamba 5]
 Chikara chakabvumirwa kutaura chikataura mazwi okuzvikudza nookushonha Mwari chakabvumirwa kutonga kwemwedzi makumi mana nemiviri. Chakazarura muromo chichitaura mazwi okushonha Mwari Chichishonha zita rake napaanogara zvichireva avo vanogara kudenga. Chakabvumirwa kurwisa vatsvene nokuvakurira; chakapiwa ukuru pamarudzi ose navanhu vose nendimi dzose nendudzi dzose. Vose vanogara panyika vachachigwadamira vachichinamata, vose zvavo vana mazita asina kunyorwa pasi pasati pavapo, mubhuku roupenyu reHwayana yakauraiwa. Ane nzeve ngaanzwe. Anenge achifanira kutapwa anotapwa anouraya munhu nebakatwa, anofanira kuuraiwawo nebakatwa. Ndikoka kutirira uye chitendero chinodiwa pavatsvene. Zvino ndakaona chimwe chikara chakabuda pasi chakanga chiine nyanga mbiri sehwayana uye chaitaura sezigaranyanya. Ichi chaiva namasimba ose echikara chokutanga chichiita kuti pasi navagari vapo vagwadamire vachinamata chikara chokutanga chakanga chiine ronda rakaipisisa rakanga rapora. Chaiita zviratidzo zvinoshamisa zvikuru, kunyange kutozomotsa moto mudenga uchiuya pasi vanhu vakatarisa. Nezvishamiso izvozvo zvachaibvumirwa kuita pamberi pechikara chiya chainyengedza vagari vapasi, chichivati vaite chifananidzo chechikara chakakuvadzwa nebakatwa chiya, asi chikararama. Chakabvumidzwa kupa chifananidzo chechikara chiya mweya unofema zvokuti chifananidzo chechikara chaitogona kutaura. Uye kuti vanenge vasina kugwadama vachinamata chifananidzo chechikara vauraiwe. Uye chinoitawo kuti vose vakuru navaduku, vapfumi navarombo vose vakasununguka navarandawo, vaiswe mucherechedzo paruoko rworwudyi kana pahuma. Zvokuti hapana anogona kutenga kana kutengesa kunze kokunge anomucherechedzo, zvichireva zita rechikara ichocho kana kuti nhamba yezita racho. Pano apa panodiwa ungwaru. Munhu anonzwisisa ngaatsvage azive zvinorehwa nenhamba iyoyo yechikara nokuti ari kurehwa nenhamba iyoyo munhu. Nhamba yacho mazana matanhatu namakumi matanhatu nenhanhatu.
Uye ini ndinoti kwamuri, ani naani anoramba mukadzi wake kunze kokunge aita upombwe achizoroora mumwe anoita upombwe.”
Asi ini ndinoti, ‘Ani naani anoramba mudzimai wake kunze kokunge chikonzero chacho chiri choupombwe, anomuita kuti aite upombwe. Ani naaniwo anoroora mukadzi akarambwa anoita upombwe.’
Magwaro Matsvene ose akafemerwa naMwari uye ane basa pakudzidzisa napakutsiura napakugadziridza munhu uye pakudzidzisa kuita zvakanaka
 Tenzi akataurira Mosesi achiti, “Udza vaIsiraeri izvi: Ngatiti mukadzi womunhu aita unzenza hwokusatendeka kumurume wake, mumwe murume akarara naye zvikasazivikanwa nomurume wake, pasina amuona, asiye akazvin'oresa. Saka hakuna angamupomere mhosva uye panenge pasina chapupu nokuti anenge asina kubatwa achizviita. Ngatiti murume iyeyo afungidzira mukadzi wake akazvin'oresa, kana kuti mweya wokufungira unouya paari asi mukadzi wake asina kuzvin'oresa, pakadaro murume ngaaende nomukadzi wake kumupristi. Ngaauye nechibayiro chinodiwa kuti chipirwe iye cheupfu hwebhari hunorema kirogiramu rimwechete. Asi ngaarege kuisa mafuta eorivhi muupfu ihwohwo, kana kuhuisa rusenzi nokuti iwoyo mupiro wembesanwa weshanje, unoreva kuti pakaparwa mhosva inofanira kuyeukwa. “Mupristi ngaaunze mukadzi iyeyo andomumisa pamberi paTenzi. Mupristi ngaadire mvura inoera mumudziyo wevhu, anokore ivhu romutendhe rinoera ariise mumvura iya. Mupristi ngaamise mudzimai iyeyo pamberi paTenzi ngaarudunure vhudzi romukadzi iyeyo, amubatise mumaoko upfu hwemupiro wembesanwa weshanje unoreva kuti paparwa mhosva inofanira kuyeukwa. Mupristi ngaabate mumaoko ake mbiya iya ine mvura inozhurungunda kuvava yokurengeresa rushambwa. Mupristi iyeyo ngaaite kuti mukadzi uya apike mhiko yokuti, ‘Kana usina kutorana nomumwe murume kana usina kutsaukira kunezvakan'ora uri mumaoko omurume wako mvura iyoyi yokurengeresa nayo rushambwa ngairege kuwana chainokuita.’ Asi kana wakaita zvako zvounzenza, iwe uri mumaoko omurume wako, uyezve kana iwe wakazvin'oresa uchitorana nomumwe murume asiri murume wako, pakadai mupristi ngaatsidzire mukadzi iyeyo rushambwa achiti kumudzimai, ‘Tenzi ngaaite kuti urengererwe pakati pavanhu vakwako uzvimbe dumbu, upfudzike pamuviri.’ Mukadzi iyeyo ngaadaire achiti, ‘Ameni, ngazvive saizvozvo.’ “Mvura iyi inopa rushambwa ngaipinde nomudumbu mako, muviri wako uzvimbe, upfudzike pamuviri. “Mukadzi iyeyo ngaati, ‘Ameni, ngazvive saizvozvo.’ “Mupristi ngaanyore kurengerera rushambwa ikoku, mubhuku asukire zvanyorwa zviya mumvura iya inozhurungunda kuvava. Mupristi ngaamwise mudzimai mvura iyoyo inozhurungunda yokurengeresa. Mvura iyoyo yokurengeresa rushamba ichapinda maari igomurwadzisa zvakanyanya. Mupristi ngaatore upfu hwemupiro weshanje pamaoko emudzimai iyeyo ahusumudzire kuna Tenzi achipira mupiro wembesanwa paatari. Mupristi ngaanokore tsama yahwo yechirango ahupise paatari. Shure kwaizvozvo ngaanwise mukadzi iyeyo mvura iya. “Mupristi kana achinge amunwisa mvura iya, kana mukadzi iyeyo achinge akazvin'oresa asina kutendeka kumurume wake, mvura yokurengeresa rushambwa ichamupinda igomurwadza zvakaipisisa. Ichafufumisa muviri wake kuzvimba, achazvimba dumbu agopfudzika pamuviri; achave munhu akarengererwa rushambwa pakati pavanhu vokwake. Asi kana mukadzi iyeyo asina kuzvin'oresa akachena, hapana chinomuwana, uye achava nembereko zvake. “Uyu ndiwo murao wakanangana nezveshanje, kana mudzimai achinge atsauka aita zvounzenza zvake achizvin'oresa, iye ari mumaoko omurume wake, uye kana murume apindwawo nomweya weshanje, oitira mukadzi wake shanje. Ngaaunze mukadzi wake pana Tenzi, mupristi aite kune mukadzi iyeyo zvose zvinorehwa nomurawo uyu. Murume wake achashamba mhosva iyi maoko, asi mukadzi iyeyo achawana mubairo wouipi hwake.”
1 Madzimambo 7:23
Akagadzira zibhavhu ziguruguru kwazvo noutare hwaakaita zvokunyungurutsa. Rakanga rakatenderera richiita mamita mana ana masendimita mana kubva pamuromo kuyambuka kune mumwe muromo. Udzamu hwaro hwaiita mamita maviri ana masendimita makumi maviri, upamhi hwaro huchiita mamita mana ana masendimita makumi mana. Kuritenderedza rose raiita mamita gumi nematatu ana masendimita makumi maviri.
Uyai nezvegumi zvakakwana mumba mokuchengetera zvinhu kuitira kuti mumba mangu muve nechokudya nezvo mundiedze henyu ndizvo zviri kutaura Tenzi wehondo nehondo muone kuti ini ndinorega here kukuzarurirai mahwindho okudenga ndichikuwodzvorerai mafashafasha emakomborero.
Makaimisira miganhu yaisingafaniri kupfuura kuti irege kufukidzazve nyika.
Mwari akatarisa panyika ndokuona kuti paora kwazvo nouipi nokuti vanhu vose panyika vakanga voita zviito zvakaora.
Mvura yakazara ikafukidza makomo ikaapfuurira namamita manomwe.
 Mvura yakaramba ichingoserera kusvikira pamwedzi wegumi. Zvino mumwedzi wegumi, pazuva rokutanga rawo, misoro yamakomo yakaonekwa. Kuzoti kwapera mazuva makumi mana, Nowa akazurura hwindo rengarava riya raakagadzira. Akatuma gunguo asi rakaramba richidzengerera zvaro kusvikira mvura yapwa panyika. Akazotumawo njiva achida kuziva kuti mvura yapwa here panyika. Asi njiva yakashaya pokumhara, ikadzokera kungarava nokuti mvura yakanga ichiripo panyika. Akaburitsa ruoko akaibata ndokuidzosera mungarava.
Chitenderano chandinoita nemi ndechichi chokuti, ‘Handichazomboparadza zvakare zvipenyu zvose namafashamo emvura uye hakuchazovizve namafashamo emvura okuparadza pasi pose.’ ”
Mwari akatarisa zvose zvaakanga aita, onei zvakanaka kwazvo. Kwakasviba kukaedza, iri rakava zuva rechitanhatu.
1 VaKorinte 10:13
Hamuna kumbova nechiedzo chisina kumbowira vamwe. Mwari akatendeka. Haakuregei muchiedzwa zvinopfuura simba renyu. Pamwe nechiedzo anopawo nzira yokupukunyuka nayo kuti ukwanise kuchirwisa.